प्रश्न जवाफ | January 2020
यदि यसले कम गर्छ वा खाली गर्दछ भने कम्प्युटर (ल्यापटप) पुन: सुरूवात गर्ने
मुख्य प्रश्न जवाफ
Samsung 860 EVO SSD सँग मुद्दा
नमस्ते मसँग एक समस्या छ जसमा निर्माताले पनि मद्दत गर्न सक्दैन, तथ्य यो हो कि मैले SSD EVO 860 256 जीबी खरिद गरेँ, सबै काम राम्रो हुन्छ, यो चाँडो लोड हुन्छ, तर समस्या अझै पनि त्यहाँ छ। सैमसंग एसएसडी जादूगर5सँग काम गर्ने कार्यक्रमले पहिले नै फर्मवेयर संस्करण डाउनलोड गरेको छ, यसको कुनै पनि कारणले यो मेरो पीसीमा काम गर्न चाहन्छ।
एक आईपी क्यामेरा वाइफाइमा काम गर्न सक्छ
शुभ दिन! कल मैले एक Vimtag Snowman वायरलेस PTZ क्लाउड आईपि क्यामेरा CP1 आईपी क्यामेरा किन्। आज मैले यसलाई स्थापना गर्न थाल्नुभयो, मैले गरे, यो गरे, यो निर्देशन अनुसार, जहाँ यो भन्छ कि तपाइँ क्यामेरालाई युएसबी वा एक विद्युत आउटलेटमा जडान गर्न आवश्यक छ। मैले यसलाई USB मा जडान गरें, त्यसपछि Wi-Fi मा। सबै कुरा ठीक छ, क्यामेराले काम गरिरहेको छ, केहि किलोमिटरको लागि गएका छन्, जाँच गरियो, सबै कुरा देखिने राम्रो देखिन्छ।
हार्ड अपरेसनको लागि हार्ड डिस्क जाँच गर्दै
नमस्ते म कसैलाई हार्ड ड्राइव जाँच गर्न तपाईंको साइटमा जानु भयो, किनकि पीसीले खराब काम गर्न थाल्नुभयो, तर मलाई थाहा छैन कि कसरी उपचार गर्ने। मैले धेरै फरक जानकारी पढें, मैले हेरें, र मैले हार्ड डिस्क (500 जीबी एचडीडी) को बारेमा यस्तो जानकारी पाए। मलाई थाहा छ कि यदि धेरै रातो र नीलो ब्लकहरू - यो खराब छ। म0रातो र 1 नीलो, केवल 1 नीलो छ, तर म पनि थाहा छैन कि हार्ड ड्राइवको लागि "सामान्य" कति हो, तर कति कति "सामान्य छैन" (हार्ड डिस्क 5-6 वर्षको उमेर छ) र म तपाईंलाई मद्दत गर्न चाहन्छु र सुझाव दिएका कति "सामान्य" रातो र नीलो टूटी क्षेत्रहरू कठिन छ, र कसरी कतिपय "सामान्य छैन" र यो हार्ड ड्राइभ परिवर्तन गर्न सोच्ने समय हो।
विन्डोज डिफेंडरद्वारा अनुप्रयोगको सुरुवात अवरुद्ध गर्दा त्रुटि
विन्डोज 10 मा, अनुप्रयोग स्थापना गर्ने समस्या। संरक्षक कट अफ गर्न मद्दत गर्दैन। जब तपाइँ स्थापनाकर्ता सुरु गर्नुहुन्छ, एउटा हस्ताक्षर "तपाईंको संगठनले यो अनुप्रयोगलाई विन्डोज डिभेंडरमा अनुप्रयोग व्यवस्थापन प्रकार्य प्रयोग गरेर अवरुद्ध पार्दछ" पप अप गर्दछ। सुझाव पढ्नुहोस्, यो BIOS मा सुरक्षा बुट असक्षम गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर यो प्यारामिटर उपस्थित छैन, यो हो, बूट ट्याबमा उपकरणहरू सूचीमा सुरक्षा ट्याबमा प्राथमिक प्राथमिकता दिनुहोस्, परिमिति F12 सेट गर्नुहोस् ....
विन्डोज 7-10 मा सबैभन्दा आवश्यक मेनु आदेश "EXECUTE" के हो? कुन प्रोग्रामहरू "EXECUTE" बाट चलाउन सकिन्छ?
सबैलाई राम्रो दिन। जब विन्डोजसँग विभिन्न समस्याहरू सुल्झाउने बेला, "अक्सर" मेनु (यो मेनु प्रयोग गरेर तपाईँले ती दृश्यहरू लुकाएका कार्यक्रमहरू चलाउन सक्नुहुन्छ) मार्फत विभिन्न आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। तथापि, केहि विन्डोजहरू विन्डोज नियन्त्रण प्यानल प्रयोग गरेर सुरू गर्न सकिन्छ, तर नियमको रूपमा, यो लामो समय लाग्छ।
आईएसओ इमेजहरूसँग काम गर्ने उत्तम कार्यक्रमहरू के हो?
शुभ दिन! नेटमा फेला पार्न सक्ने सबैभन्दा लोकप्रिय डिस्क तस्बिरहरू मध्ये कुनै निश्चित रूपमा ISO ढाँचा हो। सबै भन्दा रोचक कुरा यो हो कि त्यहाँ यो ढाँचा समर्थन गर्ने धेरै प्रोग्रामहरू देखिन्छ, तर यो छविलाई डिस्कमा बचत गर्न वा यसलाई सिर्जना गर्न आवश्यक छ - एक पटक र त्यसपछि ... यस लेखमा म काम गर्ने सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रमहरू विचार गर्न चाहन्छु। आईएसओ छविहरू (मेरो विषयक विचार, बेशकमा)।
ISO, MDF / MDS, NRG बाट डिस्क जलाउन कसरी?
शुभ दोहोरो सम्भवतः, हामी प्रत्येकले प्राय: ISO खेलहरू र अन्य विभिन्न खेलहरू, कार्यक्रमहरू, कागजातहरू, आदि जस्ता डाउनलोड गर्दछौं। कहिलेकाहीँ, हामी तिनीहरूलाई बनाउँछौं र कहिलेकाहीँ, तिनीहरू वास्तविक मिडियामा एक सीडी वा डीभिडी डिस्कमा रेकर्ड हुन आवश्यक पर्दछ। प्रायः प्राय: तपाईलाई छविबाट डिस्क जर्न आवश्यक पर्दछ जब तपाई यसलाई सुरक्षित गर्न र बाह्य सीडी / डीभिडी मिडियामा जानकारी बचत गर्नुहुन्छ (यदि जानकारी भाइरस वा कम्प्युटरद्वारा ओएस दुर्घटना हुन्छ), वा तपाईंलाई विन्डोज स्थापना गर्न डिस्क चाहिन्छ।
कसरी किबोर्डमा छिटो टाइप गर्न सिक्नु - प्रोग्रामहरू र अनलाइन सिमुलेटरहरू
नमस्ते! अब समय हो, कम्प्युटर बिना नै, यो अब छैन र यहाँ छैन। र यसको अर्थ कम्प्युटर कौशलको मूल्य बढ्दै गएको छ। यो किबोर्डमा नदेख्ने यस्तो उपयोगी उपयोगी हुन सक्छ, दुई हातले छिटो टाईपिङ गतिको रूपमा। यो यस्तो कौशल विकास गर्न सजिलो छैन - तर यो एकदम सही छ।
सकारात्मकता निर्धारण गर्न एक्सेल सूत्र
एक्सेलमा सूत्र कसरी बनाउने? सम्पत्तिमा खारेज गर्ने समय। 04/01/1997 मा एक सैनिकको एक उदाहरण भर्ती गरिएको थियो, र 07/31/2017 मा इस्तीफा दिइयो। 9/9/1979नम्बर916 क्रमशः उसले तीन वर्षको लागि 1 टुक्राको सर्दाम जैकेट दिनेछ, र क्रम संख्या 148 07.2008 लाई4वर्षको लागि 1 टुक्रा जारी गरिनेछ। देखि 14।
तस्विरहरू र तस्विरहरू रूपान्तरण गर्दै
शुभ दोहोरो आजसम्म, सञ्जालले सयौं हजारौं तस्विरहरू र फोटोहरू फेला पार्न सक्दछ। तिनीहरू सबै विभिन्न ढाँचामा वितरित छन्। यदि तपाईं तिनीहरूको साथ काम गर्नुहुन्छ भने, कहिलेकाँही तपाईँले उनीहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ: आकार घटाउनका लागि, उदाहरणका लागि। यसैले, आजका लेखमा हामी छविहरू परिवर्तन गर्न नसक्ने छौँ, तर लोकप्रिय ढाँचाहरूमा बाँचिरहेका छौं, कहिलेकाँही प्रयोग गर्ने कुन कुरा हो ... सामग्री 1।
ल्यापटपमा टचप्याड असक्षम पार्नुहोस्
शुभ दिन! टचप्याड विशेष रूपमा पोर्टेबल यन्त्रहरूको लागि डिजाइन गरिएको एक स्पर्श-संवेदनशील यन्त्र हो, जस्तै ल्याप्टप, नेटबुक, आदि। टचप्याडले जवाफ दिन्छ जब तपाइँ यसको सतहमा औंला थिच्नुहुन्छ। साधारण माउसमा प्रतिस्थापन (वैकल्पिक) को रूपमा प्रयोग गरियो। कुनै पनि आधुनिक ल्याप्टप टचप्याडको साथ मात्र छ, यो बाहिर फर्केर, यो कुनै पनि ल्याप्टपमा बन्द गर्न सजिलो छैन ... टचप्याड किन बन्द गर्नुहुन्छ?
कम्प्युटरमा नि: शुल्क चित्र कार्यक्रमहरू के हो?
आजको संसारमा, कम्प्यूटरहरू हाम्रा जीवनमा तीव्र गतिमा प्रवेश गर्दै छन्। धेरै क्षेत्रहरू PC को प्रयोग बिना अवांछनीय छ: जटिल गणितीय गणनाहरू, डिजाइन, मोडेललिंग, इन्टरनेट जडान, आदि। अन्तमा, यो रेखाचित्रमा आए! अब केवल कलाकारहरू मात्र होइन, तर सरल प्रेमीहरूले सजिलै विशेष कार्यक्रमको मद्दतबाट केही प्रकारका "कृति" राख्ने प्रयास गर्न सक्छन्।
कसरी सबै डेटा र विन्डोजसँग हार्ड डिस्क जगेडा गर्ने?
शुभ दिन प्राय: धेरै निर्देशनहरूमा, ड्राइभर अद्यावधिक गर्न वा कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना गर्नु अघि, यो कम्प्युटरमा काम गर्न, बहाल गर्न बैकअप बनाउन सिफारिस गरिन्छ। मलाई त्यो सिफारिशहरू, प्राय: म सुझाव दिन्छु। सामान्यतया, विन्डोजले निर्मित निर्मित पुनःप्राप्ति प्रकार्य गरेको छ (यदि तपाईंले यसलाई अक्षम नगरेको छैन), तर म यो सुपर-विश्वसनीय र सुविधाजनक फोन गर्दैन।
प्रदर्शनको लागि भिडियो कार्ड कसरी जाँच गर्ने?
शुभ दिन नयाँ भिडीयो कार्ड (र सम्भवतः एक नयाँ कम्प्यूटर वा ल्यापटप) खरिद गर्ने एक बुलाया तनाव परीक्षण को लागी सबै भन्दा अति उत्तम छैन (लामो लोड अन्तर्गत अपरेशनको लागी भिडियो कार्ड जाँच गर्नुहोस्)। यो "पुरानो" भिडीयो कार्ड टाढाको लागि पनि उपयोगी हुनेछ (खास गरी यदि तपाईं यसलाई अपरिचित व्यक्तिको हातबाट लिनुहुन्छ)।
प्रदर्शनको लागि भिडियो कार्ड जाँच गर्दै, स्थिरता परीक्षण।
शुभ दिन भिडियो कार्डको प्रदर्शन खेलहरूको प्रत्यक्ष गतिमा निर्भर गर्दछ (विशेष गरी नयाँहरू)। तर, खेल, तथापि, एक कम्प्यूटर परीक्षण को लागि एक पूरी कार्यक्रम को रूप मा (एक नै विशेष परीक्षण प्रोग्राम मा अक्सर प्राय को गेम को अलग अलग को लागि प्रयोग गरिन्छ जसको लागि फ्रेम प्रति सेकेन्ड मा मापा छ)।
किन विन्डोज 10 आफैले सुरु गर्दैन
प्रिय अरिडी प्योनोनाभ! मेरो लामो पीडाले सैमसंग ल्याप्टपलाई तीन-पटक निलो स्क्रिनको मृत्यु भएको र विन्डोज 10 लाई पुनःस्थापित गरेको छ, तर पहिलेको उत्पन्न भएको दोषले अगाडि बढ्यो: सुरु गर्न, मैले F2 थिच्न थाल्दा जब स्क्रिनले4चरणहरू दायाँ-देखि-बाहिर-बाहिर-5 चरणहरूमा टाँस्न सक्छ TSSTcorp CDDUDW SN 208BB-Enter।
कम्प्युटरमा काम गर्ने थकित आँखाले मलाई बताउछ कि कसरी ओभरवर्कबाट जोगिन सक्छ?
नमस्ते तथ्यको बावजुद 21 औं शताब्दी आएको छ - कम्प्यूटर प्रविधिको उमेर, र कम्प्युटर बिना र त्यहाँ होइन र यहाँ होइन, सबै पछि यसको पछि लाग्न सक्दैन। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, ओक्लिस्टले पीसी वा टिभीमा एक घण्टा भन्दा बढीको लागि भेट्न सिफारिस गर्छ। निस्सन्देह, म बुझ्छु, उनी विज्ञान, आदिद्वारा निर्देशित छन्।
विन्डोजका लागि एन्ड्रोइड ए्युलेटर (उद्घाटन खेलहरू र एन्ड्रोइड प्रोग्रामहरू)
यो आलेखले आफ्नो घर कम्प्युटरमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोग चलाउन निर्णय गर्नेहरूलाई उपयोगी छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ ट्याबलेट वा स्मार्टफोनमा डाउनलोड गर्नु अघि अनुप्रयोग कसरी काम गर्नुहुन्छ हेर्नु हुन्छ; राम्रो, वा केही खेल खेल्न चाहान्छ, त्यसपछि यो एण्ड्रोइड ए्युलेटर बिना यो असम्भव छ! यस लेखमा हामी विन्डोजका लागि उत्तम इम्युलेटरको काम र सामान्य प्रश्नहरूको प्रायः प्रायः प्रयोगकर्ताहरूका लागि उठाउनेछौं ... सामग्री 1।
Wi-Fi मार्फत कसरी एसएमएस स्मार्ट टिभी इन्टरनेटमा जडान गर्ने?
नमस्ते हालको साताहरूमा, प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ कि कल कल कस्तो लाग्थ्यो कि एक कथा कथा आज एक वास्तविकता हो! म यो तथ्यलाई भन्छु कि आज, कम्प्युटर बिना पनि, तपाईंले पहिले नै इन्टरनेट पेजहरू ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ, यूट्यूबहरूमा भिडियोहरू हेर्नुहोस् र इन्टरनेटमा अन्य चीजहरू टिभी प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्!
PPTX फाइलहरू कसरी खोल्न सकिन्छ?
सूचना प्रविधिहरूको विकासलाई नयाँ मल्टीमीडिया ढाँचाको सिर्जना गर्न आवश्यक छ, उज्ज्वल, स्मारक डिजाइन, संरचित पाठ, अधिक वा कम जटिल एनीमेशन, अडियो र भिडियो संयोजन। पहिलो पटक यी समस्याहरू पीपीटी ढाँचा द्वारा हल गरिएको थियो। एमएस 2007 को रिलीज पछि, यो एक अधिक कार्यात्मक पीपीटीएक्स द्वारा प्रतिस्थापित भएको थियो, जुन अझै पनि प्रस्तुतीकरण को लागि प्रयोग गरिन्छ।
हामी एक ल्यापटपबाट वाइफाइ वितरण गर्छौं
ग्राफिक सम्पादकमा आकर्षित गर्न सिक्नुस्स्केप
धोखाधडीबाट बैंक कार्ड कसरी सुरक्षित गर्ने
एमएस शब्दमा उद्धरण राख्नुहोस्
Google क्रोम प्रयोग गरी, ब्राउजरले तपाईले भ्रमण गर्नुभएको वेब पृष्ठहरूको बारेमा जानकारी रेकर्ड गर्दछ, जुन ब्राउजिङ ईतिहासमा उत्पन्न हुन्छ। ब्राउजरमा समय समयमा, सफा गर्ने प्रक्रिया को लागी यो सल्लाह दिईन्छ, जुन ब्राउजिङ्ग ईतिहास सफा गर्ने समावेश गर्दछ। समयको कुनै पनि ब्राउजरले जानकारीलाई जम्मा गर्दछ जुन खराब प्रदर्शनको दिशामा जान्छ। थप पढ्नुहोस्
हामी पप कला पोर्ट चित्रमा राख्छौँ
हामी माईबोर्डलाई प्रणाली इकाईमा जोड्छौं
https://termotools.com ne.termotools.com © प्रश्न जवाफ 2020